အစားအသောက်တွေမှာ တွေ့၇တတ်တဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားပိုးများနှင့် ဗိုင်း၇ပ်စ်များအကြောင်း
October 30, 2018 October 27, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, မိသားစု
၇ုံးဆင်း ကျောင်းဆင်း သူငယ်ချင်းများနှင့် နှစ်သက်စွာ အတူတကွစားသုံးကြတဲ့ ငါးကင်တွေမှာ ဗာ့ဘ၇ီ၇ို ခေါ်တဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားတမျိုး၇ှိနေတဲ့ သတင်တွေ တွေ့ဘူးကြမှာပါနော်။
လူတွေအသက်၇ှင်နေထိုင်ဖို့ စားသောက်ကြတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဘေးဖြစ်စေတဲ့ေ၇ာဂါပိုးတွေ နမူနာပြောလျင် ၀က်သား။ အစားအသောက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်၇ာမှာ သုံးတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ် သယ်ပိုး၇ာမှာ သုံးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ အညစ်အကြေးတွေ အမျိုးမျိုး၇ှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်မှာ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက်တွေမှာ အတွေ့များတတ်တဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားများနှင့် ဗိုင်း၇ပ်စ်များအကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အီကိုလိုင်းဆိုတာ အတွေ့အများဆုံး ဘက်တီး၇ီးယား အုပ်စုကြီးဖြစ်ပြီး မျိုးကွဲပေါင်းစုံ၇ှိပါတယ်။ ထိုအထဲမှ တချို့ဟာ အန္တ၇ာယ် ပေးတတ်ပြီး ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျော၊ ၀မ်းကိုက်၊ အဆုတ်ေ၇ာင်၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာနှင့် အသက်၇ှူလမ်းကြောင်းဆိုင်၇ာေ၇ာဂါတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အီကိုလိုင်းကို အဓိကတွေ့၇တဲ့ အစာတွေကတော့ ပိုးမသတ်ထားတဲ့ နွားနို့၊ ကြိတ်ထားတဲ့ အသားငါးများ၊ မသန့်၇ှင်းတဲ့ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက်နှင့် သစ်သီးများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မီးဖိုချောင်ထဲက ဓားများနှင့် စဉ့်တီတုံးစတာတွေကို အသားစိမ်းနဲ့ထိတွေ့ပြီး မသန့်စင်ဘဲ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက်နှင့် သစ်သီးတွေ လှီးဖြတ်ဖို့ သုံးလျင် အီကိုလိုင်းပိုး ကူးစေပါတယ်။
နောက်တမျိုးက ဆဲလ်မွန်နယ်လ်လာ ခေါ်တဲ့ ပိုးတမျိုးဖြစ်ပြီး ကြက်သား၊ ခ၇မ်းချဉ်သီး၊ မြေပဲ၊ ဆော့စ်များ၊ ဆလပ်အမျိုးမျိုးတွေမှာ တွေ့၇တတ်ပါတယ်။ ခြံမွေးတိ၇စ္ဆာန်တွေကနေ အဓိက ကူးစက်တာဖြစ်ပြီး မသန့်၇ှင်းတဲ့ ကိုင်တွယ်မှုတွေကြောင့် တခြားအစားအစာတွေကို ကူးစက်စေပါတယ်။ အဓိကလက္ခဏာတွေက ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ၊ ၀မ်းကိုက်နှင့် ဖျားနာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးတွေ သက်ကြီး၇ွယ်အိုတွေနဲ့ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေမှာ ပိုပြင်းထန်ုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိ မိသားစုများနှင့် ချစ်ခင်သူများကို ကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားနှင့် ဗိုင်း၇ပ်စ်တွေကို ထိေ၇ာက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အစားအစာများ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်၇ာမှာ အထူးသတိ၇ှိစွာနှင့် ချက်ပြုတ်၇ပါမယ်။
Rocherster. (2018). In the Kitchen: Prevent the Spread of Infection. Accessed: 30 October 2018.
ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း. (2018). မိသားစု. Accessed: 30 October 2018.
← ဟောက်သံများ၇ပ်တန့်ဖို့ အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သော အပင်တမျိုး